Wadatashiyada diyaarinta istaraatiijiyadda hannaanka nafaqada dalka oo la soo gabagabeeyay – Radio Daljir
Wadatashiyada diyaarinta istaraatiijiyadda hannaanka nafaqada dalka oo la soo gabagabeeyay
Febraayo 9, 2019 7:01 g 0
Tubta arrimaha bulshada iyo wasaaraha Beeraha, kaluumaysiga iyo xannaanada xoolaha ayaa maanta soo gebagebeeyay wadatashiyada bulshada Soomaaliyeed lagala yeelanayay samaynta istaraatiijiyadda hannaanka nafaqada dalka.
Istaraatiijiyaddaan hannaanka nafaqada dalka oo hoggaanka fulinteeda uu leeyahy xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa loogu tala galay in mudda shan sano ah dalka looga ilaaliyo nafaqa darrada, dhammaan dawladda iyo hay’adaha caalamiga ah ku shaqeeyaan iyada oo la raacayo himilooyinka tubta arrimaha bulshada.
Barnaamijka dardar-gelinta Cunada caafimadka iyo koriimaha leh ee Soomaaliya (Scaling up Nutrition, SUN) oo kamid ah barnaamijyada hoos taga xafiiska ra’iisul Wasaaraha, mas’uulna ka ah horumarinta siyaasadda qaran iyo istaraatiijiyadda amniga cunnada iyo nafaqada, ayaa diyaarinta istaraatiijiyaddaan iyo isku xirka dhammaan dhicyada ku lugta leh waxa uu geliyay waqti dheer si loogu diyaar garoobo qorshihii ummadda Soomaaliyeed looga bad-baadin lahaa nafaqo darro.
Wasiirrada caafimaadka iyo shaqada xukuumadda federaalka Soomaaliya, oo ka hadlay kulankii lagu soo gebagebeynayay wadatashiyada ayaa sheegay in Soomaalida oo dhan ay waajib ku tahay qorshaha nafaqa darrada looga cirirb tirayo guud ahaan dalka.
Istaraatiijiyadda hannaanka nafaqada dalka ee wadatashiyadii bulshada lagala sameynayay lasoo gebagebeeyay, ayaa la hor-geynayaa golaha wasiirrada si ay u ansixiyaan looguna saleeyo qorshaha shanta sano ee sare u qaadidda heerka nafaqada dalka.